Bayern Munich oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2020/21.… + SAWIRRO – Gool FM
(Munich) 10 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee ka dheesha horyaalka Bundersliga ee dalka Jarmalka ayaa soo bandhigtay maaliyadda ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub.
Bayern Munich waxa ay shaacisay maaliyadda ay ku ciyaari doonto marka ay mininkeeda joogto xilli ciyaareedka cusub ee 2020/21.
Maaliyaddan ayaa dhammaanteed wada casaan ah ayaa kuleetiga iyo afka hore ee gacmaha waxa ay ku leedahay diillin caddaan ah, sidoo kale diilimo caddaan ah ayay ku leedahay halka dhinaca feeraha ku beegan.
Labiskan cusub oo ay kooxda Munich ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub waxaa farsameysay shirkadda qalabka isboortiga ee Adidas, waxaana xabadka kaga dheggan .T… oo ah shirkadda ay xayeysiiso iyo astaanta kooxda.
Soo bandhigtista maaliyaddan cusub waxaa ka qeyb qaatay Thomas Müller, Serge Gnabry iyo David Alaba.
Maaliyaddaan cusub waxa ay Bayern Munich markeedii ugu horreysay ku ciyaari doontaa kulanka caawa ay wajahayaan naadiga Frankfurt ee afar dhammaadka ama Semi-finalka German Cup.